ဥတ္တရမွန်းစက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာရေးကို အားလုံး လိုလားကြပါသည်။ စိတ်မရှည်စွာနှင့် စောင့်မျှော်နေသည်မှာလည်း ကြာလွန်းလှပါပြီ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ နည်းမျိုးစုံနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ၊ နောက်ဆုံး သံဃာတော်များပါမကျန် ပါဝင်လာကြသည်မှာလည်း အထင်အရှားပင်။ အများလိုလားနေကြသည့် ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်သို့ ဦးတည် ချီတက်ကြရာဝယ် အချင်းချင်း စည်းလုံးရေး၊ ညီညွတ်ရေးသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း အမြဲလိုလို ကြားနေရသည်။ အခုရော ကျနော်တို့ တကယ်စည်းလုံးကြပြီလော?ပြည်နယ်လား၊ တိုင်းလားမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကို ပြန်ကြည့်ပါက ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း စသည်ဖြင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခု ရှိပါသည်။ နာမည်တစ်ခုစီကို သေသေချာချာရွတ်ပြီး အာရုံမှာ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ပြည်နယ်ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် 'တိုင်း'ထက် သေးငယ်သော ဒေသ သို့မဟုတ် တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရာဒေသဟု အလိုအလျောက် မျက်စိမှာလည်းပေါ်လာ၊ စိတ်ထဲမှာလည်း ထင်နေရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်လို့ ဆိုလိုက်သည်နှင့် ကချင်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းလို့ ဆိုလိုက်သည်နှင့် ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ရာ စသည်ဖြင့် အာရုံမှာ အလိုလို ပေါ်လာသည်။အဲဒီမှာကိုက မှားနေပြီ။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဟု ဆိုခြင်းအားဖြင့် အကြီးနှင့်အငယ်၊ တောင်ပေါ်နှင့် မြို့ပြ အစွဲကို ဖြစ်စေသည်။ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခု အစား ပြည်နယ် ၁၄ ခု ဟူ၍သာ သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ နိုင်ငံသား လား၊ တိုင်းရင်းသား လားအမှန်စင်စစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေရာဒေသအားလုံးတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံအနည်းအများ ရောနှော နေထိုင်လျက်ရှိသည်မှာ အားလုံးသိကြပါသည်။ ဥပမာ ကချင်ပြည်နယ်၌ ကချင်လူမျိုး အပါအ၀င်၊ ကုလား၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ တရုတ်၊ လီဆူး စသည်ဖြင့် အခြားလူမျိုးများစွာ နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။တနေ့က မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြောတာကို မှတ်မိသေးသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖိတ်၍ ဗမာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကို သွားလည်မိသောအခါ အပြင်၌ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးးသော ဗမာများစွာကို တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု အံ့သြစွာပြောပြသည်။ အလားတူပင် ခရစ်ယာန် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများ၌ တွေ့ဖို့ ခဲယဉ်းမည်၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်လည်း အတူတူပင် ဖြစ်ပါမည်။ ဒါကတော့လည်း မထူးဆန်းပါ၊ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ဟူသော အခွင့်အရေး လူတိုင်းမှာ ရှိကြသည် မဟုတ်လော။ သို့ရာတွင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ဗမာနှင့် အခြားလူမျိုးများ အတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ အလုပ် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်လော? ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကရင်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မြနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်မှ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တို့ ၂ ဦးကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လေ့လာကြည့်ပါ (ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်နိုင်သည်)။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါသည်။ ၉ မိနစ်နီးပါးကြာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတို၌ မည်သူက သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး၊ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မည်သို့ သဘောထားသည်ကို မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ တိုင်းပြည်က မပြိုကွဲသေး၊ အချင်းချင်း ကွဲနေတာ ကြာပြီဟု ထင်ပါသည်။ ထင်ထင် ရှားရှား မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အခြေအနေများက ကွဲရန် မသိမသာ ဖန်တီးပေးခဲ့သလို ဖြစ်နေသည်။တရုတ်နိုင်ငံကို ကြည့်ပါ၊ သူတို့မှာ လူမျိုးစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ရှိသည်။ သို့သော် တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ကို “မင်း ဘာလူမျိုးလဲ”ဟု မေးပါက 'တရုတ်'ဟုသာ ဖြေမည်ဖြစ်ပြီး 'ကွမ်းတုံ' 'ဖူးကျန့်' 'ယူနန်'လို့ ဖြေမည် မဟုတ်ပါ။ 'တရုတ်' ပြောလိုက်ရုံနှင့် ထိုသူသည် တရုတ်ပြည်၏ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်နေပါသည်။ လူမျိုးအရ ထိုသူသည် ကွမ်းတုံ သို့မဟုတ် ဖူးကျန့်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ သူက 'ကချင်' ငါက 'ဗမာ'၊ သူက 'ကရင်' ငါက 'ရှမ်း' စသဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းအတူနေထိုင်ကြသော ' မြန်မာ' ဟု မမြင်နိုင်ဘဲ လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲ ဖြစ်နေသည်မှာ ကြာလှပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေရသည့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများလည်း ရှိတော့ ရှိသေးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးအတွက် မကောင်း၊ အကျိုးမဖြစ်နိုင်ပါ။ တိုင်းသူ ပြည်သား တသားတည်းလားတဆင့်တက်၍ ဆွေးနွေးချင်သေးသည်။ မည်သူမဆို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မွေးဖွားကြီးပြင်းလာသူ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ တရားဝင်နေထိုင်လာသူ အားလုံး 'မြန်မာနိုင်ငံသား' ဖြစ်သင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာသော တရုတ်၊ ကုလားများကို နိုင်ငံခြားသားဟု သတ်မှတ်နေခြင်းသည်လည်း မှားသည်ဟု ထင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြသော များစွာသော တရုတ်၊ ကုလားတို့သည် ယနေ့အထိ 'မြန်မာနိုင်ငံသား' မဖြစ်သေးဘဲ 'နိုင်ငံခြားသား' အနေဖြင့်သာ ရှိနေရသည်။ ထိုသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ တိုင်းပြည်အရေး တို့သည် သူတို့အတွက်မဟုတ်၊ သူတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ထင်မှတ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့အတွက် ရွေးချယ်စရာလမ်းမှာ စီးပွားရေးလုပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ သာရှိတော့သည်။ ဆိုလိုချင်သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာကိုသင်၊ သို့သော် တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်ဘက်ကမှ မပါဝင်နိုင်ဘဲ ဘေးရောက်၊ အဝေးရောက်ကုန်ကြသည်။ နိုင်ငံအတွက် ဆုံးရှုံးးမှု တရပ်ပင်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ထိုသူများ၏ ရင်ထဲမှာ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းပြောသလို ' ဆူး' တစ်ချောင်း ထပ်ပေါက်လာပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို မကြာသေးမီက ရောက်လာသော ရှမ်းပြည်နယ်မှ လူငယ်တစ်ဦး၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်ကို မေးကြည့်သောအခါ “မြန်မာပြည်ကို ချစ်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်နဲ့ပဲ နေခဲ့ရတာဆိုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံ မဟုတ်သလို ခံစားရတယ်။ လူမျိုးကတော့ တရုတ်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် တရုတ်ပြည်ဆိုလည်း ကျနော်နဲ့ မဆိုင်သလိုပဲ၊ ကျနော့်အတွက် နိုင်ငံမရှိသလို ခံစားမိတိုင်း ဖီလင်ငုပ်တယ် အစ်ကိုရ . . . ” ဟု ထိုလူငယ်က ပြောပြခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြသော နိုင်ငံခြားသားဟု သတ်မှတ်ထားခံရသည့် တရုတ်နှင့် အခြားလူမျိုးများ ဘယ်လောက်များ ရှိလိမ့်မလဲ။ သူတို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးပြုနိုင်မည့် အရည်အချင်းများ အစွမ်းအစများ မရှိနိုင်ဘူးလား။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုကို တရုတ်၊ အိန္ဒိယလူမျိုးတို့အပေါ် အပြစ်တင်ဝေဖန်နေသည်မှာလည်း မမှန်ဟု ထင်ပါသည်။ နဂိုကမှ ကွဲနေသည်ကို ထပ်ခွဲသလို ဖြစ်နေသည်။ ကိုယ်တွေ့ ကိုယ်တွေ့ဟိုးယခင် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ် လုပ်နေစဉ်တုန်းက ပင်ပန်းလွန်းသည်၊ လုပ်အားခနည်းသည်ဟု အမြဲတွေးပြီး မပျော်နိုင်တော့ဘဲ ဖြစ်နေစဉ်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်ပြသောအခါ သူက "စားသောက်ဆိုင်တွေက အားလုံးအတူတူပါပဲ၊ သူဌေး ကိုပဲ အပြစ်တင်မနေနဲ့၊ ကိုယ့်ဘာာသာ ရုန်းထွက်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပါ" ဟုပြောခဲ့တာ မှတ်မိသေးသည်။ မှန်ပါသည်၊ ဒုက္ခရောက်တိုင်း ပြင်ပအခြေအနေ၊ အခြားသူများကိုချည်း အပြစ်မတင်သင့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး ရုန်းထွက်ဖို့သာလိုပါသည်။ ကိုယ်တိုင် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ထိုင်ပြီးအော်နေရုံဖြင့် ဘာမှပြောင်းလဲမသွားနိုင်ပါ။ Evolution ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီအရ ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်နေထိုင်သွားနိုင်သည့် သတ္တ၀ါသည်သာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ဖြစ်ပေါ်လာရန် ကြိုးပမ်းနေရာတွင် ပြင်ပနိုင်ငံများ၏ ထောက်ခံမှု၊ ကူညီမှုတို့မှာ အရေးကြီးသော်လည်း အကယ်စင်စစ် လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့် အင်အားသည် ပိုမိုကြီးမားပါသည်။ ထိုအင်အားကို မစည်းရုံးနိုင် မစုစည်းနိုင်သေး၍သာ ဖြစ်နေသည်။ မေးခွန်းလား၊ အဖြေလားဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးနှင့် ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာ အတူတကွ ရင်းနှီးစွာမိတ်ဖွဲ့ ဆွေးနွေးဖလှယ်မှု မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? ဗမာနှင့်ကချင်၊ ကရင်နှင့်ဗမာ စသဖြင့် အတူတူ လက်တွဲ တိုင်ပင်ဖော် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? တရုတ် နှင့် ကုလား မြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက် မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးလား? အားလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်တစ်ခုဆောင်ရွက်ရာ၌ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အဖွဲ့အစည်း အစွဲများကို မေ့ထားပြီး ရည်ရွယ်ချက်ကိုသာ ဦးတည်ထားလျက် ဖွင့်ထားသော နှလုံးသားဖြင့် သဘောထားကြီးစွာ၊ စိတ်ရှည်စွာ၊ ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဆိုလျှင် အခြားဘာလုပ်လုပ် မအောင်မြင်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါ။ ထိုသို့သော အခြေအနေကို ဖန်တီးနိုင်ရန် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည် လိုအပ်သော လမ်းစဉ်နှင့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ချမှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အကယ်၍ အားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် တစ်ခုတည်းတစုတည်း မမြင်နိုင်သေးဘဲ လူမျိုးအစွဲ ဒေသအစွဲဖြင့် ဗမာ၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ တရုတ် ၊ နိုင်ငံခြားသား၊ တောင်ပေါ် မြေပြန့် စသဖြင့် မြင်နေသေးသရွေ့၊ နောက်ထပ် ရှေ့ဆက်ပြီး ငါ့မြင်းငါစိုင်း နေရင်တော့ဖြင့် . . . ။ ။
12 September 2008 ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး မစ္စတာအီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီ (Mr. Ibrahim Gambari) ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် မအောင်မြင်ဘူးလို့ သူ မယူဆတဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း(Ban Ki-moon) က မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ဒါပေမယ့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီက အဲဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မနေ့ကရှင်းလင်းတင်ပြရာမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်တာ မရှိဘူးလို့ တင်ပြပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက သူမျှော်မှန်းထားသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မတွေ့ရလို့ အများနည်းတူ သူလည်း အားမလို အားမရဖြစ်ရတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်တာတွေ အပါအ၀င် ဘက်ပေါင်းစုံကပါဝင်သင့်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပြီး အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရအနေနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ရေရာသေချာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းတာကို တွေ့မြင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ မနေ့က ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်မအောင်မြင်ဘူးလို့ အများက သုံးသပ်ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။"မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင် လူတိုင်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေကြသလိုပဲ ကျနော်လည်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ် မအောင်မြင်ဘူးလို့တော့ ကျနော်မယူဆပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ သံရေးတမန်ရေး လမ်းကြောင်းတွေ အားလုံးကနေဆက်မလုပ်တော့ဘဲ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ပစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သူမအောင်မြင်ဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။"ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက မစ္စတာဂမ်ဘာရီကို ပေးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်အတိုင်း တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အထိ ကျနော်တို့ ဆက်ကြိုးစားသွားကြမှာပါ။ မနက်ဖြန်မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများ နိုင်ငံတွေရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ သံအမတ်ကြီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတခု ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သြဇာညောင်းတဲ့ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကျနော်ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားဦးမှာပါ။"မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှာလည်း အလားတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို သူအကြံပြုခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ပြောပါတယ်။"မြန်မာအစိုးရက ကျနော့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကို လက်ခံခဲ့ပေမယ့် ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကျနော့်ရဲ့အဆိုပြုချက်တချို့နဲ့ နောက်ဆုံးတခေါက် ခရီးစဉ်အတွင်း ကျနော်အဆိုပြုခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မြန်မာအစိုးရက ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အတော်လိုနေပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့၊ အစိုးရနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ ဆိုတဲ့အချက်တွေ မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အဓိက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတာတွေနဲ့ အကြံပြုတာတွေကို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။"ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေက သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးတခေါက် ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရော စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ပါ မတွေ့ခဲ့ရလို့ အားလုံး စိတ်ပျက်ကြတဲ့အကြောင်း ပြောကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက စိတ်ပူနေကြပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီတခေါက် သူ့ကို ဘာဖြစ်လို့ လက်ခံမတွေ့တာလဲလို့သတင်းထောက်တွေက မေးရာမှာတော့ …"ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင် ဘာကြောင့်မှန်းမသိပါဘူး။ အရင်ခရီးစဉ်တွေမှာ ကျနော်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့တုန်းက ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ ကွဲလွဲနေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၇ ကြိမ် တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခရီးစဉ် ၅ ခေါက်မှာ တခေါက်က ၂ ကြိမ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူနဲ့အစိုးရကြား ဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာ ကုလသမဂ္ဂက အချက်အချာကျကျပါဝင်တာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံထားပါတယ်။ နောက် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေးကိုလည်း လိုလားပါတယ်။"ကျနော့်ကိုတွေ့ဖို့ ငြင်းတာ၊ သူ့ရှေ့နေကလွဲလို့ ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့ဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာ့ကြောင့်လဲ မသိရပေမယ့် အားလုံးလိုပဲ သူလည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ သူ့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတာ ဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကိုလည်း ကျနော်တို့ နားလည်ပါတယ်။"မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လက်ရှိအနေအထားကိုရော အန်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတာတွေကိုပါ သူ လုံခြုံရေးကောင်စီကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ပြောပါတယ်။"အန်န်အယ်လ်ဒီ အမှုဆောင်လူကြီးတွေနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့တော့ စစ်အစိုးရနဲ့ကျနော် ဆွေးနွေးမယ့် ၅ ချက်အနက် ၄ ချက်ကို သူတို့ သဘောတူပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအချက်ကို သူတို့ သဘောမတူဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားမ၀င်တာကြောင့် အန်န်အယ်လ်ဒီက လက်မခံဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီကို တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။"ဒါပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက ချမှတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရရွေးကောက်ပွဲအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတွေပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီရဲ့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတာတွေကို အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာတခု သတ်မှတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်။"မစ္စတာဂမ်ဘာရီအနေနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကို ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေသေးသရွေ့ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ မအောင်မြင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်တဲ့အကြောင်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ဖြေဆိုသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ မြန်မာ့အရေး ကြိုးစားနေတာ မအောင်မြင်လို့တခြားလူတယောက်နဲ့ အစားထိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကတော့ ထွက်ပေါ်နေဆဲပါပဲ။ Summary only...
12 September 2008 ဦးကျော်ဇံသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားတာတွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့ အယူခံတဲ့အပေါ် ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းက မျှော်လင့်ချက်ထားနေပါတယ်။ ဒီခံယူချက်အတိုင်းစစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တကယ်ပဲ လွှတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဦးကြည်ဝင်းရဲ့ ပြောကြားချက်အပေါ် ဦးကျော်ဇံသာက သုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားတာကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ အယူခံဝင်တဲ့ကိစ္စ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းက ဒီကိစ္စကို မျှော်လင့်ချက်ထားတယ်လို့ ပြောဆိုပေမယ့် ဒါဟာ ဥပဒေကြောင်းသက်သက်ကိုကြည့်ပြီး သွေးရိုးသားရိုး ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင် မျှော်လင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဦးကြည်ဝင်းရဲ့ ပြောကြားချက်ကို အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ရင် ဒီအယူခံကိစ္စမှာ အဖုအထစ်တွေ ရှေနေသေးတဲ့အကြောင်း ပေါ်လွင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။"ကျနော်တို့က အယူခံတင်ဖို့ ပြင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ပဲ ကျနော် ပြောချင်တယ်။ သိပ်လည်း အစွမ်းကုန်ကြီး ပြောလို့မသင့်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ချက်ထားတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒီအယူခံမျိုးက သာမန်ပြောရင်တော့ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာမျိုး ထားလို့မရတဲ့ အယူခံမျိုးဗျ။"ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အယူခံရမှာက အစိုးရအဖွဲ့၊ Council of Ministers ပေ့ါ၊ အဲဒီကိုအယူခံရမှာ။ အဲတော့ အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲ ပုဒ်မ ၁၄ အရ ဒီတားဆီးအမိန့်ကို တနှစ်ပြီးတနှစ် သူတို့က တိုးပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီမှာပဲ ကျနော်တို့က အယူခံရမယ်ဆိုတာကြီးကတော်တော်လေး ပြင်းနေတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။"ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းကတော့ ဗမာပြည်ထဲကနေပြီး အရေးအကြီးဆုံး အမှုသည်တယောက်ရဲ့ အတိမ်းအစောင်း လုံးဝမခံနိုင်တဲ့ အမှုကိစ္စတခုကို ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ ပြောသွားတဲ့စကား ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပမှာရောက်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးမင်းလွင်ဦးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အယူခံမှု အလားအလာကို အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။"ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေမှာ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံသားတဦး၏ မူလအခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်တာက ဗဟိုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဗဟိုအဖွဲ့မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌ၊ကာကွယ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့က အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါတဲ့ ဗဟိုအဖွဲ့ကနေပြီးစတင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မူလအခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်တာဖြစ်တယ်။"ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ကန့်သတ်တဲ့ဥစ္စာ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား ရှိပါတယ်။ သူတို့ကန့်သတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလ ကျော်သွားပြီဆိုရင် ဆက်ပြီးတော့ တားမြစ်ကန့်သတ်ဖို့အတွက် ဗဟိုအဖွဲ့ကို တင်ပြပြီး ဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆက်ပြီးတားမြစ်ရတာဖြစ်တယ်။အခု ဆက်လက်တားမြစ်ထားတဲ့ကာလက အလွန်ဆုံး ၅ နှစ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ အခု၅ နှစ်ပြည့်နေပြီဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၅ နှစ်ကာလမှာ တိုးပြီးသတ်မှတ်တဲ့ကာလတွေကလည်းဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကန့်သတ်ခဲ့တာတွေဖြစ်တယ်။"အခုအယူခံရမယ်ဆိုတာကလည်း ဗဟိုအဖွဲ့ကိုပဲ ပြန်ပြီး အယူခံရမယ်ဆိုတော့ သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့အမိန့်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်မလား၊ ဒါကလည်း ကျနော်တို့ သိပ်မယုံမရဲ ဖြစ်စရာကိစ္စဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော ဒီကိစ္စရပ်မှာသိပ်ပြီး မျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်မယ်လို့တော့ မထင်ဘူး။ ၀န်ကြီးအဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်း ဒီကိစ္စကို အမှန်တကယ် စေတနာရင်းအမှန်နဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဆန္ဒရောရှိရဲ့လား၊ဒါကလည်း သံသယဖြစ်စရာဖြစ်တယ်။"နောက်တခါ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို မကျေနပ်လို့ တရားရုံးချုပ်အထိဆက်တက်ဦးမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာ တရားရုံးချုပ်က ၀န်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့အောက်မှာ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သက်သေသာဓကမြောက်မြားစွာ တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မျှော်လင့်လို့မရနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့နေရပါတယ်။"တကယ်တမ်းသာ ဥပဒေအတိုင်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဥစ္စာကလျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ ဖြစ်သွားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒီလောက်ထိလည်း ချုပ်ထားဖို့မလိုဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ ဥပဒေပါအတိုင်းဆိုရင် ကန့်သတ်ထားတဲ့ အခြေခံမူတွေအရကို အနိမ့်ဆုံး၊ကာလအတိုဆုံး ချုပ်နှောင်ထားရမယ်ဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ပုဒ်မပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတွက် ဒီဥစ္စာကမျှော်လင့်ချက် သိပ်မရှိနိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။"အဓိကအားဖြင့်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းထားတာက နိုင်ငံရေးအရဖမ်းထားတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေတွေဆိုတာက လူကြားကောင်းအောင်လျှောက်ပြောနေတာလို့ပဲ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စဖမ်းတုန်းကသူမရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းထားရတာပါဆိုပြီး ထိုစဉ်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကလည်း အာဆီယံလို အစည်းအဝေးကျရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မေးခွန်းကို ဖြေရမှာ အတော်လေး ရင်လေးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေကြပုံ ပေါက်ပါတယ်။ သူတို့ခမျာ မင်းတို့ ဘယ်လိုပြောခဲ့ဆိုတာ အထက်ကတိတိကျကျ ညွှန်ကြားချက်လည်း ပါလာခဲ့ပုံ မရှိပါဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တကယ်ဖမ်းထားရမလား၊ လွှတ်ပေးရမလားဆိုတာ အဓိကအဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ့်လူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Summary only...
12 September 2008 ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် - ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ် ဇာမေး ခါလီဇက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီအရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ နိုင်ငံတကာရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို စစ်အစိုးရဖက်က မသိကျိုးကျွံပြုနေတာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်နေတာတွေကြောင့် စစ်အစိုးရအပေါ် ပိုမို ဖိအားပေးလုပ်ဆောင်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန် သံအမတ်ကြီးတွေက တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်ကနေ ၂၃ ရက်နေ့ အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီက သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မနေ့က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီထံမှာ တင်ပြအပြီး အခုလို ပြောဆိုလိုက်ကြတာပါ။ ဒီအကြောင်း ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဘရာဟမ် ဂမ်ဘာရီ သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနေ့က ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီတင်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေအကြား ကောင်းမွန်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဇာမေး ခါလီဇက် (Zalmay Khalilzad) က ပြောပါတယ်။“မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ချမှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက် ၂ ရပ်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဦးတည်စေမယ့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံး ပြန်လွတ်ပေးရေး စတဲ့ကိစ္စတွေမှာ သိသာတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိမလာခဲ့ဘူးလို့ ပရော်ဖက်စာ ဂမ်ဘာရီ တင်ပြလာတဲ့အပေါ် အမေရိကန်နဲ့ တခြား တိုင်းပြည် တော်တော်များများက ယူဆခဲ့ပါတယ်။”ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီက အကြိမ်ကြိမ်လည်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို တိုးတက်မှု တစုံတရာ မရှိတာကြောင့် ဒီ ဦးတည်ချက် ၂ ရပ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ကုလသမဂ္ဂ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ပြီး စစ်အစိုးရပေါ် ပိုမို ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့ သံအမတ်ကြီး ခါလီဇက် က ပြောပါတယ်။“ဒီကိစ္စ ၂ ရပ်စလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရအပေါ် ဒီထက်ပို ဖိအားပေး လုပ်ဆောင်သင့်တယ် လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။ အဓိကပြဿနာက စစ်အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီတွေကြောင့် ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီအပေါ် ဘယ်လို ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ပြီး ချဉ်းကပ်သင့်တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့ အတော်လေး ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။”စစ်အစိုးရဖက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်နေတာနဲ့ လုပ်ဆောင်လိုစိတ်မရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း တခြား မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့ သူ့အနေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်း မစ္စတာ ခါလီဇက်က ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီး John Sawers ကလည်း စစ်အစိုးရဖက်က အခုလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီအရေး ဖော်ဆောင် နှောင့်နှေး ပျက်ကွက် နေတာကြောင့် အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ငန်းတွေ အမြန်ဆုံး ဖော်ဆောင်နိုင်အောင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ရပ်တည် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။“ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကြီးတခုလုံးအနေနဲ့ရော၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတခုချင်းစီ အနေနဲ့ရော မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဘယ်နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် သုံးသပ်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။”ဒါ့အပြင် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အခုနောက်ဆုံး ခရီးစဉ်အပေါ် စစ်အစိုးရရဲ့ ဆက်ဆံမှုကို စိတ်ပျက်မိကြောင်းလည်း မစ္စတာ Sawers က ပြောပါတယ်။“မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အခုနောက်ဆုံး ခရီးစဉ်အပေါ် စစ်အစိုးရရဲ့ ပြုမူ ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အပေါ် ကျနော်တို့ အတော်လေး စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေနဲ့ စစ်အစိုးရအကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီက လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်ကတည်းက ရည်မှန်းချက်တွေကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။”ကုလမသဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းကလည်း စစ်အစိုးရဖက်က နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်နေတဲ့အပေါ် စိတ်ပျက် မိကြောင်း လုံခြုံရေးကောင်စီ စည်းဝေးပွဲအပြီးမှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ နောက်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စစ်အစိုးရကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြန်စနိုင်ဖို့ကိစ္စ စတဲ့ ကုသလမဂ္ဂဖက်က မျှော်လင့်ထားတာတွေထက် အများကြီး လျော့ကျခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်း မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြောခဲ့ပေမယ့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်ကို မအောင်မြင်တဲ့ ခရီးစဉ်လို့ ပြောဖို့ သူက ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး ကိစ္စကို သံတမန်ရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖက်ပေါင်းစုံက ကြိုးစား လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အကြောင်းပဲ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ကနေ ၂၃ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သိန်းရွှေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့သလို ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်ကလည်း သူနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ဒီခရီးစဉ်ဟာ အောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ NLD အပါအ၀င် အတိုင်အခံ အင်အားစုတွေဖက်က ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Summary only...
Agencies / ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်မလာသေးသဖြင့် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တွင် ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် အများယုံကြည်လက်ခံပြီး အားလုံးပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တခု လုပ်ဆောင် ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတိုးတက်အောင် သိသာထင်ရှားသည့် ခြေလှမ်းများလှမ်းသည်ကို မြင်တွေ့ လိုကြောင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ပြောသည်။မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက “မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စအပေါ်မှာ ခင်ဗျားတို့လိုပဲ ကျနော်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်။ ပြီးတော့ လူတိုင်းလိုပဲ ကျနော်လည်း စိတ်ပျက်မိပါတယ်” ဟု ၀န်ခံပြောကြားသည်။သို့သော် ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို မအောင် မြင်ဟုမမှတ်ယူကြောင်းနှင့် မအောင်မြင်ဟုယူဆပါက သံတမန်ရေးအရ ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ရပ်လိုက်မှသာ မအောင်မြင်ဟု မှတ်ယူနိုင်မည်ဟု မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြောသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ယမန်နေ့က လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ အစီရင်ခံခဲ့သည့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ ကမူ ၎င်း၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်၌ မျှော်လင့်ထားသလို သိသာထင်ရှားသည့် ရလဒ် မရရှိခဲ့သဖြင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားသည်။မစ္စတာဂမ်ဘာရီက “ကျနော်တို့ရဲ့ အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ အကြံညဏ်တွေကို တုံ့ပြန်ပြီးတော့ သိသာ ထင်ရှားတဲ့ရလဒ်ရအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဟာ မြန်မာအစိုးရအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပြီးတော့ အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆက်လုပ်ဖို့ပါ” ဟု ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မတွေ့ဆုံခဲ့မှုသည် အားလုံးအတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏အမြင်ကို ယခင်ခရီးစဉ်များအတွင်းက ရခဲ့သကဲ့သို့ ယခု အသေအချာမသိရှိခဲ့ရကြောင်း၊ အခွင့်အရေး အမြန်ရသည်နှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ပြောသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သံအမတ် မစ္စတာ ဇလ်မေခါလီဇတ်ကမူ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုကို ပြန်လည်ဆန်း စစ်သင့်ကြောင်းနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရဆီမှ ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာအောင် ဖိအားပေးရမည်ဟု ယမန်နေ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ တခါးပိတ်အစည်းအဝေးပွဲ၌ ပြောသည်။မစ္စတာ ခါလီဇတ်က “ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းကို အာခံနေတယ်။ ဘယ်နည်းလမ်းဟာ ပိုပြီးတော့ ထိရောက်မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည် တယ်”ဟုပြောသည်။ဗြိတိသျှ သံအမတ်ကြီး ဂျွန်ဆာဝါးစ်ကလည်း အမေရိကန်သံအမတ်၏ ပြောကြားချက်ကို သဘောတူကြောင်း ပြောကြားပြီး ဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်အောင် တောင်းဆိုနေမှုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုနေမှုတို့အား ငြင်းဆန်နေသည့် မြန်မာအစိုးရကို ဖိအားပိုမို ပေးကြရန် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က တောင်းဆိုသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရေး တို့အတွက် ဆောင်ရွက်မှုများကို လက်လျှော့မည်မဟုတ်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ပြောကြားသည်။ကုလသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီးများပါဝင်သည့် မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖွဲ့နှင့် ယနေ့တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သြဇာရှိသည့်နိုင်ငံများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်၍ တတ်နိုင်သလောက် ဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက ပြောကြားသည်။By NEJ Summary only...
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 12 2008 23:15 - မြန်မာစံတော်ချိန် (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ရာ)ကုလအထူးသံတမန်၏ မကြာသေးခင်က ပြီးဆုံးခဲ့သော ခရီးစဉ်အပြီးတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြိုးပန်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံများ အကြားတွင် အားမလိုအားမရ ဖြစ်မှုများ သိသိသာသာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ဤနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကြီးမှတဆင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရန် ယန္တရား ရှားပါးလှသောကြောင့် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး သမားများနှင့် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ အကြားတွင် အကြပ်အတည်း ကြုံနေရသော နိုင်ငံအတွက် အာဏာ ချိန်ခွင်လျှာကို ပြောင်းလဲရန်သာ ကျန်တော့သည်။ ဤအထဲမှ တခုမှာ ယခု လတ်တလော ဆောင်ရွက်နေသော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် စစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုခံရသော အစိုးရအဖြစ် ဝင်ရောက်နေရာယူ ကိုယ်စားပြုထားခြင်းကို ငြင်းပယ် ကန့်ကွက်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ဖြစ်သည်။ဖယ်ရှား ထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စနစ်ပထမဆုံး နားလည်ဘို့ လိုသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂတွင် လျှောက်ထားမှု လုပ်သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ အဖြစ်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းရေးမဟုတ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စစ်အစိုးရ၏ ကိုယ်စားပြုနေမှုကိုသာ ဖယ်ရှားရေး ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စသည်လည်း လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင်သာ အာဏာအပ်နှင်း ထားသော ကိစ္စဖြစ်သည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းထုတ် စိန်ခေါ်မှုများကို အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ယမန်နေ့က ရှင်းလင်းခန့်မှန်း ပြောကြားချက်အရ အထွေထွေ ညီလာခံ၏ ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီထံသို့ ကနဦးအနေဖြင့် ညွှန်ကြား လွှဲအပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤကော်မီတီက သူ့ထံ ပေးပို့လာသော အဆိုပြုချက်ကို လက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် သူတို့၏ အဆိုပါ ထောက်ခံ တင်ပြချက်ကို အထွေထွေ ညီလာခံ၌ သုံးပုံနှစ်ပုံမဲဖြင့် ထောက်ခံ အတည်ပြု ပေးရမည် ဖြစ်သည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကိုယ်စားပြုမှု ပြဿနာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မီတီတွင် အမျိုးမျိုး ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးပါ ကော်မီတီက ဤပန်ကြားချက်ကို ထောက်ခံနိုင်သည်၊ ငြင်းပယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်သည်။ ရွှေ့ဆိုင်းထားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် ပြဿနာတွေ အများကြီး ပေါ်လာနိုင်သည်။ တိုင်းပြည်၏ ကိုယ်စားပြုမှုကို ဘယ်သူ့မှ မပေးဘဲ လစ်လပ်ထားနိုင်သည်၊ နောက်တက်လာမည့် ကော်မတီက မည်သည့် အရေးယူမှုမျှ မလုပ်ဘဲ ထားနိုင်သည်၊ မည်သည့် ထောက်ခံချက်မျှ မပေးဘဲလဲ ထားနိုင်သည်။အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးပါ ကော်မီတီကို အထွေထွေ ညီလာခံကျင်းပသည့် အကြိမ်တိုင်းတွင် အသစ်ရွေးချယ် တာဝန်ပေးအပ်ရသည်။ သို့သော် အစဉ်အလာအရ တရုတ်၊ ရုရှ နှင့် အမေရိကန်တို့က အပြောင်းအလဲမရှိ ဤကော်မီတီတွင် အမြဲ နေရာရကြသည်။ ထို့ပြင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၂၉ အရ ကိုယ်စားလှယ် တဦးဦးကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တခုခုက ကန့်ကွက်ခဲ့လျှင် ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မီတီက အစီရင်ခံ၍ အထွေထွေ ညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ချက် ပေးသည်အထိ ယာယီ ဆက်လက် ကိုယ်စားပြုခွင့်ရှိပြီး အခြား အဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးနှင့် တန်းတူ တူညီသော အခွင့်အရေး ရှိသည်ဟု ပြဆိုထားသည်။ထို့ပြင် စစ်အစိုးရကို ဖယ်ရှားရန် ကန့်ကွက်သည့် ပန်ကြားလွှာကို စဉ်းစားရန် ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် တရုတ်၊ ရုရှ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်တို့က ၃ဝ ပြု ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နည်းစနစ်အရ ပြောလျှင် စစ်အစိုးရကို ဖယ်ရှားရန် အတိုက်အခံ၏ ပန်ကြားလွှာ အတည်ဖြစ်ရန်၊ အများစုဆုံးဖြတ်ချက်ရ၍ အထွေထွေ ညီလာခံသို့ ရောက်ရန်မှာ ကော်မတီတွင်ပါသော ကျန်ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦးအနက် ၅ ဦးက အမေရိကန်က ထားရှိမည်ဟု ယူဆရသော သဘောထားနှင့် အတူ ရပ်တည်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်၊ ရုရှ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို ဆန့်ကျင်ရမည် ဖြစ်သည်။ဤသို့ဆိုလျှင် ဤကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီက မည်သည့် စံထားချက်များကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမည်နည်း။ ။ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီ ရှေ့မှောက်တွင် တင်ပြသော အတိုက်အခံ၏ လျှောက်လဲတင်ပြချက်ရိုးရိုးသားသား ပြောရလျှင် ကော်မတီဝင်များ မှီငြမ်း ကိုးကားရန်အတွက် စစ်မှန်သော ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခွင့် စံထားချက် ဟူ၍မရှိ။အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားများက တင်သွင်းသည့် ပန်ကြားလွှာတွင် စစ်မျက်နှာ ၂ ဘက်ဖြန့်၍ ခုခံ ချေပထားသည်။ ယင်းတို့မှာ စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်မှုအတွက် ရင်းမြစ်မူလအစနှင့် မည်သို့မည်ပုံ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကို ကျင့်သုံးနေသည် ဆိုသော အချက် ၂ ချက် ဖြစ်သည်။ ပထမအချက်မှာ ယခု ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရသော ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး နောက်တခုမှာ စစ်အစိုးရက သူ့နိုင်ငံသားများ အပေါ်တွင် စနစ်တကျ ကျူးလွန် ဖောက်ဖျက်လျက်ရှိသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပညာရှင် ကျွမ်းကျင်သူ ၉ ဦးပါဝင်သည့် “၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အတွေးအမြင်” အဖွဲ့။ (၂ဝဝ၈ Opinion) ကလည်း ဤဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတို့၏ ရပ်တည်ချက် သဘောထားကို ထောက်ခံထားသည်။ ပိုင်နက်နယ်မြေကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည် ဟူသော အချက်သည် နအဖ (မြန်မာအစိုးရ) ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ တာဝန်ရှိမှုကို အစဉ်တစိုက် မသိကျိုးကျွန် ပြုနေခြင်းနှင့် သူတို့၏ အုပ်စိုးမှုတွင် လူထု၏ ထောက်ခံမှု ကင်းမဲ့နေသည် ဆိုသည့် သက်သေ ထင်ရှားပြပြီး ဖြစ်သည့်အချက်တို့ကို လွှမ်းမိုးပယ် ဖျက်ခြင်း မပြုနိုင် ဟု သူတို့က ဆိုထားသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယူးရောက် အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ကိုယ်စားပြုမှုကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြသည့် သူတို့သည် ဤ လျှောက်လဲချက်ကို ရေးသားတင်ပြရာ၌ သူတို့က ကိုယ်စားပြုမှုကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရာ၌ ပဓာနကျသော စံထားချက် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် ယူဆသော အချက်ကို တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်သည့် အချက်များ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် ယူဆကြသည့် အချက်များဖြစ်သော ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအား လေးစားလိုက်နာရေး ဟူသော အချက်များသည် စစ်အေးခေတ်၏ ပြာပုံထဲမှ နေ၍ တည်ဆောက်ထားခဲ့သော တရားဝင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်တရပ် ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆို ကန့်ကွက်မှုများလည်း ရှိနေသည်။ဂရီဂေါ်ရီဖောက်စ် (Gregory Fox) က ၁၉၉၂ ခုနှစ်က သူရေးသားခဲ့သည့် “ဒီမိုကရေစီခေတ်ရှိ အစိုးရများ၏ တရားဝင်မှု” (Legitimacy of Governments in the Age of Democracy) ဆိုသော ဆောင်းပါးတွင် ဤသို့ ရေးသားထားခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အထွေထွေ ညီလာခံသည် ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည့် အချက်ပေါ်တွင် မှီတည် ဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုခဲ့သော်လည်း မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ကုလသမဂ္ဂသည် ဒီမိုကရေစီ၏ မူလရင်းမြစ်ကို တရားဝင်မှု၏ စမ်းသပ်ချက် တရပ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ဖူးသည့် အစဉ်အလာကိုမူ ထောက်ပြရမည်သာ ဖြစ်သည်။၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ဖရန်စစ်ဖူကူယားမား (Francis Fukuyama) ၏ သမိုင်း၏ နိဂုံးနှင့် နောက်ဆုံးလူသား (The End of History and the Last Man) ဆိုသည့် စာအုပ်တအုပ် ထွက်ပေါ် လာခဲ့ခြင်းမှာလည်း တိုက်ဆိုက်မှုတရပ် မဟုတ်ပါ။ ဤစာအုပ်သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အားလုံးသို့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတည်းဟူသော တားဆီးမရသည့် ဒီလှိုင်းကြီးတရပ် တက်လာနေပြီ ဆိုသည့်အချက်ကို ကိုင်စွဲ ယုံကြည်ကြသူများအတွက် စာပေနယ်ပယ်တွင် စံပြုစရာ အချက်ကြီးတချက် ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် အဆိုပါ ဒီလှိုင်းကြီးမှာလည်း အမေရိကန်က စစ်အေးတိုက်ပွဲတွင် အနိုင်ရလိုက်ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းမှသာ အရှိန်အဟုန် ရလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၉ဝ စုနှစ်များ၏ အစပိုင်း နှစ်များသည် ဒီမိုကရေစီ၏ မျှော်မှန်း တမ်းတချက်များအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဘွယ် လှုပ်ရှားတက်ကြွနေသော ကာလများပင် ဖြစ်သည်။ဖောက်စ် (Fox) က ဒီမိုကရေစီ မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီကို အသုံးပြုသင့်သည် ဆိုသော အဆိုကို တင်ပြခဲ့သည်။ ကော်မတီအနေဖြင့် အထွေထွေ ညီလာခံတွင် အစိုးရတရပ်ရပ်ကို နေရာပေးရာ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်ကို လေးစား လိုက်နာခြင်းတည်း ဟူသော အချက်ကို မလွဲမသွေ လိုက်နာရမည့် ရှေးဦးလိုအပ်ချက် တရပ်အဖြစ် ထားရှိသင့်သည်ဟု ခုခံချေပ ပြောဆိုခဲ့သည်။ဤဒီမိုကရေစီ အလားအလာနှင့် စံသတ်မှတ်ချက် ခုခံချေပ ပြောဆိုချက်ကို ထောက်ခံသည့် အနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ ၉ ဦး အပါအဝင် စာရေးသူ အများအပြားကလည်း ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေးကော်မတီ ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သော စစ်အေးလွန်ခေတ် အဖြစ်အပျက်များကို ရိုးတိုးရိပ်တိတ် ရည်ညွှန်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။နိုင်ငံ၏ နယ်မြေအစိတ်အပိုင်း အများစုကို ထိန်းချုပ် ထားနိုင်ခဲ့သော်လည်း အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ကိုယ်စားပြုနေရာ ယူခွင့်ကို အာဏာပိုင်များက ငြင်းပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံများတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဟေတီ၊ လိုင်ဘေရီးယား နှင့် စီယာရာလီယွန်း နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များ၌ ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီက ရွေးကောက်ပွဲ နည်းလမ်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်အာဏာ ဖယ်ရှားခံရသည့် ရွေးကောက်ခံ အစိုးရများကိုသာ လိုက်လျော အသိအမှတ် ပြုပေးခဲ့သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို မလိုက်နာ အသိအမှတ် မပြုသည့် အမှုကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် အစဉ်အလာတရပ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ပန်ကြားလွှာ တင်သွင်းသူများ နောက်ထပ် တင်ပြသော အချက်တချက် ဖြစ်သည့် စစ်အစိုးရသည် သူ့လက်ထဲရှိ အာဏာကို မည်သို့မည်ပုံ အလွဲသုံးစားလုပ်သည် ဆိုသည့် အချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖောက်က်စ် (Fox) က ဤသို့ မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ (အသားအရောင် ခွဲခြားရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည့် ကာလက) တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၏ ဥပမာသည် ထင်ရှားသော သာဓကတခု ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်မှလွဲ၍ နိုင်ငံတနိုင်ငံသည် ယင်း၏ အာဏာကို မည်သို့မည်ပုံ သုံးစွဲသည် ဟူသောအချက်ကို အခြေခံ၍ အစိုးရတရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရပ်တည်ခွင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သည့် နောက်ထပ် သာဓက မရှိ။ နိုင်ငံတော် အာဏာကို တရားမဝင် ကျင့်သုံးနေသောကြောင့် ယင်းအစိုးရကိုလည်း တရားမဝင် အစိုးရအဖြစ် ယူဆရမည်ဟူသော အချက်သည် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံအတွက် ဤဖြစ်ရပ်သည် ဖြစ်တန်ရာသော အချက်အလက်တခု ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ထို့ကြောင့် အာဏာ၏ မူလရင်းမြစ် ဆိုသည့်အချက်ကို ဗဟိုပြုစဉ်းစားသည့် သာဓကမျိုး အများအပြား မရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော် အာဏာကို မည်သို့မည်ပုံ သုံးစွဲကိုင်တွယ်သည် ဆိုသည့် အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည့် အစဉ်အလာမူ ကုလအထွေထွေ ညီလာခံနှင့် ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေးကော်မတီ တို့၌ ရှိနေသည်။ သို့သော် စဉ်းစားစရာများမူ ရှိနေပါသည်။ အထွေထွေ ညီလာခံကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းကြီးများက ရောင်ပြန် ဟပ်ထားသည့် တရားဝင်မှုတည်း ဟူသော ပြဿနာ၏ ခေတ်သစ်ကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက တကယ်တမ်း လက်တွေ့တွင် ထွေးပွေ့ ကြိုဆိုကြပါ့မလား။ သဘောတရားရေးအရ ကွဲပြားခြားနားမှုများသည် အမှန်တကယ် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီလား။ အမျိုးသားရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွါးများကို အသစ် ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာနေသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေ မူဝါဒသစ်များ၏ လက်အောက်ခံ ပြဿနာအဖြစ် လိုလိုလားလား တိုးတက်လက်ခံ လာနေကြပါပြီလား။နိုင်ငံတကာဝန်းကျင်ရှိ ရန်လိုမှုဟူးဗားအင်စတီကျူးရှင်း (Hoover Institution) ၏ အဆိုအရ ၁၉၉ဝ မှ နောက်ဆယ်စုနှစ်ဝက် အထိ ကာလအတွင်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ၏ ရာခိုင်နှုံး တိုးတက်လာမှုကို ကမ္ဘာကြီးက မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ ယခင်ထက် ဝက်ခန့်မှ ယခု ၅ နိုင်ငံတွင် ၃ နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖရီးဒမ်းဟောက်စ် (Freedom House) ၏ ရေးသားချက်များကို လေ့လာရလျှင် ၁ဝ နှစ်ကျော်အတွင်း ဒီမိုကရေစီအရ အုပ်စိုးနေသော နိုင်ငံများ၏ ရာခိုင်နှုံးသည် ထိထိရောက်ရောက် ဘာမှမပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေသည်။ ယခင်နှစ်ကနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း အမှန်တကယ် အသိအမှတ် ပြုခံခဲ့ရသည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများ ပို၍ နည်းသွားသည်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်။ '2008 Opinion' ၏ နိုင်ငံအလိုက် လေ့လာချက်များတွင် ဖေါ်ပြ ရေးသားထားချက်များတွင် ပါသည့် မည်သည့်နိုင်ငံမျှ ဤရာစုနှစ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော နိုင်ငံများ မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာကြီးသည် ပြောင်းလဲနေသည်။ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးသည် နိုင်ငံတကာအတွေး အမြင်စိတ်ကူးစံများ အထက်တွင် ရောက်နေသည်ကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်လာနေရသည်။အမှန်အတိုင်း ပြောရလျှင် ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီသည် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရာ၌ ဒီမိုကရေစီ၏ အရင်းအမြစ်ကို ကြည့်မှကြည့်ဖူးကြရဲ့လား ဆိုသည်ပင် သိပ်မသေချာလှပါ။ တခုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၁၉၉ဝ စုနှစ်များ ကာလ ဒီမိုကရေစီခေတ်ထ၍ ဒီမိုကရေစီဆိုသည့် စကားလုံးများ လှိုင်ဘောလယ်အောင် ပြောနေကြချိန်တွင် ချမှတ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အမှန်စင်စစ် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှ အဓိက အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် (သို့မဟုတ်) ဒေသတွင်း အင်အားကြီး နိုင်ငံများ၏ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးကို အသိအမှတ်ပြု ချမှတ်ပေးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ပြောလျှင် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါး နယ်ပယ်တွင် အန္တရာယ်အရှိဆုံး နိုင်ငံများမှာ မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသော အာဆီယံ နိုင်ငံများ၊ အိန္ဒိယနှင့် အရေးအကြီးဆုံး အန္တရာယ်အကြီးဆုံးမှာ တရုတ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဤဒေသတွင်း နိုင်ငံများ အသိုင်းအဝိုင်းသည် မြန်မာအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ အကျိုးစီးပွါးနှင့် သူတို့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးကို မျှယူ ကြည့်ရှုကြပါမည်လား ဆိုသည့်ကိစ္စမှာ သံသယဖြစ်စရာ အတော်ကောင်းပါသည်။တဖန်နောက်တချက်မှာ အထွေထွေ ညီလာခံက ဖြုတ်ချခံလိုက်ရသော ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသည့် အစိုးရဘက်မှရပ်၍ နိုင်ငံကို အမှန်တကယ် စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေသော အစိုးရတရပ်အား အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန် ခဲ့သည့် သက်သေ သာဓကကိစ္စ အများစုနှင့် မြန်မာ့အရေးမှာ မတူပါ။ ကုလသမဂ္ဂအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို ကာကွယ်ရန် သူ့ကိုယ်သူအတွက် ပူပန်ကြောင့်ကြရန် အရေးပါသော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အမွေအနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မရှိပါ။ထိုသို့ဖြစ်ရမည့်အစား မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ၏ နောက်ဆုံး ခရီးစဉ်အပြီးတွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကုလ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များက သူသည် ဘေးဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ဤအရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံအတွက် လုပ်ရမည့် ဖြစ်စဉ်တရပ်ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း တွင်တွင်ကြီး ပြောဆိုနေတုံးပင် ဖြစ်သည်။ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် စစ်အစိုးရ၏ ကိုယ်စားပြုမှုကို ဖယ်ရှားလိုက်လျှင် မည်သည့်ဖြစ်စဉ်များပင် ပေါ်ပေါက်လာသည် ဖြစ်စေ အလျင်အမြန်ပင် အဆုံးသတ်သွားရန် ဖြစ်နိုင်ခြေက ပိုများနေသည်။နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောရလျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုယ်နှိုက်က ကိုယ့်ဖာသာ ဆန့်ကျင်ဝိရောဓိ ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းကဲ့သို့ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်များကို ကျော်လွန် တည်ရှိနေသည် ဆိုသည့် ဥပဒေများ အကြောင်းကို ပြောကြလျှင်ပင် ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသည် ဝက်စ်ဖေလီယန် အလွန်ကာလ။ (Post-Westphalian) က ကျင့်သုံးခဲ့သော အမျိုးသားနိုင်ငံများ (nation states) ဆိုသည့် လောကထဲ၌သာ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ အမြစ်တွယ်လျက် ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည် ဆိုသည့် အချက်ကိုတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့နိုင်ငံ နယ်နမိတ်လွန် ဥပဒေ များကို ကုလသမဂ္ဂတွင်း၌ နောက်ထပ် အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည့် အချက်မှာ ကုလ၏ ပဋိဥာဉ်စာတမ်းနှင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ ကိုယ်တိုင်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် တည်ရှိခဲ့သည့် ကမ္ဘာကြီး၏ အခြေအနေကို ရောင်ပြန်ဟပ် ဖေါ်ပြနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က လက်ခံထားခဲ့သော အယူအဆမှာ အမျိုးသား နိုင်ငံသဘောတရားက လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ဤသို့သော နိုင်ငံတကာ ဝန်းကျင်အခြေအနေ တရပ်တွင် စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် အထွေထွေ ညီလာခံကသူ့ကို ညီလာခံ ခန်းမထဲက မောင်းထုတ်မည့်အရေးကို ကြောက်စရာ၊ စိုးရိမ်စရာ လိုပါသေးသလား။ဘာတွေ ဖြစ်လာရမှာလဲ။ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ဖြစ်စဉ်ကို ဒီမိုကရေစီ မကျသည့် အစိုးရများအား အပြစ်ပေးရာတွင် လက်နက်တခု အနေဖြင့်သာ သုံးခြင်းသာ အပြုသဘောမဆောင် အကျိုးမဖြစ်ထွန်းနိုင်ဟု မက်သယူဂရစ်ဖင် (Matthew Griffin) က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခြင်းတွင် ရေးသား ဖေါ်ပြထားသည်။ အစိုးရတရပ်၏ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ခွင့်ကို ဤသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် တည်ရှိနေသော ပြဿနာကို အမှန်တကယ် ထိထိရောက်ရောက် ပြေလည်စေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်သည့် အကျိုးအကြောင်းရှိမှသာ ပြုလုပ်ရမည် ဟု ဂရစ်ဖင် က ရေးသားခဲ့သည်။နေပြည်တော်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ပိတ်ဆို့အရေးယူရာ၌ သဘောထားအမျိုးမျိုး အကြီးအကျယ် ကွဲလွဲခဲ့မှုသည် ထင်ရှားသော သာဓကဖြစ်သည်။ ယခုစစ်အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် ကြိုးပန်းချက် အောင်မြင်ရန် အခွင့်အလမ်းသည်လည်း အထွေထွေ ညီလာခံ၏ ကျယ်ပြန့်သော အစိတ်အပိုင်းက အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပေးဘို့ လိုသည်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက ဤသို့လုပ်နိုင်ဘို့လိုသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လိပ်ခဲတည်းလည်း အခြေအနေကို အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်သည့် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမလား၊ အနှုတ်လက္ခဏာ ဆောင်သည့် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမလားဆိုသည့် အချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။ပိုကောင်းသည်ဟု ပြောနိုင်လျှင်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွါး၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွါး တို့နှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ အကျိုးစီးပွါးတို့ကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် ဆိုလျှင် ဤကိစ္စ အောင်မြင်ရေး မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ကို ခပ်ရေးရေးတော့ လှမ်းမြင်ရနိုင်ပါသည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယနေ့အနှံ့အပြား ဖြစ်ပေါ်တွေ့မြင်နေရသော အကျိုးစီးပွါးချင်း ပဋိပက္ခ၊ သဘောတရား ရေးရာများကို အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမှုတို့သည် ဤပန်ကြားလွှာ၏ ကံကြမ္မာအတွက် မျှော်လင့် အားထားနိုင်သော အရာများ မဟုတ်ပါ။ အရာအားလုံးထက် ပိုအရေးကြီးသည့် အချက်မှာ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်၌ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျဆင်းနေခဲ့သော နှင်းခဲကြီးများ နောက်တကြိမ် အရည်ပျော်ဘို့ လိုသေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ။ Summary only...
ဧရာဝတီ | စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈အာဏာရှင်များ၏သတင်းကို လေ့လာစောင့်ကြည့်နေရသည်က အမြဲတစေဆိုသလို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ယခုပင် မိမိတို့က မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်ဂျုံအီး အပြင်းအထန်ဖျားနာနေပြီဆိုသည့် သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရပြီး ဆက်လက်လေ့လာနေရသည်။ အမေရိကန်အစိုးရ အရာရှိများက ကင်ဂျုံအီး နှလုံးရောဂါဖောက်ခဲ့သည်ဟု ပင် အတိအကျ ပြောဆိုနေကြသည်။သေချာသည်မှာ မြောက်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်များကတော့ ဤသတင်းကို ငြင်းဆိုလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ မြောက်ကိုရီးယား အဆင့်မြင့်သံတမာန်တဦးကို ကိုးကား၍ ဂျပန် ကျိုဒိုသတင်းဌာနက " ဒီလို သတင်းမျိုးတွေဖြစ်လာတာဟာ တန်ဖိုး မရှိရုံမျှ မက ဒါတွေဟာ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေပါ" ဟု ငြင်းပယ်ပြောဆိုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာမိသားစုနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများက အာဏာရှင်များ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ယေဘုယျအားဖြင့် သတိထား စောင့်ကြည့်နေတတ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အဏုမြူပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတခု၏ အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီးဆိုလျှင် ပို၍ စောင့်ကြည့်နေမည်ကတော့ သေချာသည်။ အကယ်၍ သူတို့သာ ကျဆုံးသွားပါက၊ ၎င်းအာဏာ ရှင်များ၏ အလွန်ကာလတွင် အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ရုန်းရင်ဆန်ခတ်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲအတွက် လူထုအုံကြွမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသည် မဟုတ်ပါလား။ ၎င်းသတင်းက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတည်ထောင်သည့် နှစ် ၆၀ ပြည့် အခမ်းအနားသို့ ကင်ဂျုံအီးတက်ရောက်ရန် ပျက် ကွက်ခဲ့ခြင်းမှ ခန့်မှန်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူ လူထုမြင်ကွင်းက ပျောက်ကွယ်သွားပါက မည်သူ ဆက်ခံမည်ဆိုသည်ကိုလည်း သေသေချာချာ လျာထားခြင်း မရှိသေးပေ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက လွတ်လပ်ရေးနေ့ညစာ စားပွဲ တက်ရောက်ရန် ပျက်ကွက်နေခဲ့ဖူးသည်။ ဤဖြစ်ရပ်မှနေ၍လည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အပြင်းအထန် မနာမကျန်းဖြစ် နေပြီ၊ သေတော့မည်ဟူသော ခန့်မှန်းဖော်ပြချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ဖူးသည်။ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက အမှန်ပင် ထိုအချိန်က စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ဆေးကုသမှုခံယူရန် သွား ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယခုတိုင် ကျန်းမာနေသေးပုံရသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ဆမတ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း အပါအ၀င် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သေးသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များ ဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေ ဆဲ ဖြစ်သည်။ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနှင့် ကင်ဂျုံအီး၊ အာဏာရှင် ၂ ဦးတို့က အချင်းချင်း မဆုံတွေ့ဖူးကြသော်လည်း သူတို့တွင် တူညီသည့် အချက် စရိုက်လက္ခဏာ အတော်များများရှိနေသည်။ သူတို့က အစိုးမရကြ။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန် ခက်သည်။ သူတို့က သူတို့နိုင်ငံကို အထီးကျန်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားကြပြီး၊ သူတို့၏ ပြည်သူများကို ဆင်းရဲတွင်းနက်နေအောင် ထားကြသည်။ နိုင်ငံခြားသားများကို သံသယထား၍ မယုံကြည်နိုင်ကြ သလို နိုင်ငံတကာက အကြံပေးချက်များကိုလည်း လက်မခံ ပယ်ချလေ့ရှိတတ်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက နှစ်နိုင်ငံလုံး၏ စစ်တပ်များကို အင်အားကောင်းအောင် တည်ဆောက်ထားကြပြီး၊ ဖရိုဖရဲ မဖြစ်နေရလေ အောင်လည်း ချုပ်ကိုင်ထား နိုင်ကြသည်။ သူတို့ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ရှိနေသည့် ဤနှစ်နိုင်လုံးကလည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက စာရင်း သွင်းဖော်ပြခဲ့သည့် "အာဏာရှင်တို့၏ နောက်ဆုံးခံကတုတ်စခန်း" နိုင်ငံများ ဖြစ်နေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းရပ်ကွက်များ၏ အဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက မြောက်ကိုရီးယားခေါင်း ဆောင် "ကင်" နှင့် ကျူးဘားနိုင်ငံခေါင်းဆောင် "ကက်စထရို" ကို ကြည်ညိုလေးစားလှပြီး၊ သူ၏ လက်အောက်ငယ်သား များကို တိုက်တွန်းအကြံပေးရာတွင် အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဖိအားအောက်၌ ၎င်းနိုင်ငံများ မည်သို့ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နေသည် ကို လေ့လာအတုယူသင့်သည်ဟု ဆိုကြောင်း ကြားသိရသည်။အနောက်နိုင်ငံများက သူ့ကို ၀ိုင်းကျဉ်ထားကြသည့် အခြေအနေ၌ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအနေနှင့် မြောက်ကိုရီးယားကို မိတ်ဖွဲ့ အကြောင်းသင့်ရတော့သည်။ သူ့အစိုးရလက်ထက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားနှင့် သံတမာန်ဆက်ဆံရေး ပြန် လည်စတင်ခဲ့သည်။၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဒု-၀န်ကြီး မစ္စတာ ကင် ယွန် အီးလ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည် အပတ်လာ၍ နှစ်နိုင်ငံ သံတမာန်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်တွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အကြမ်းဖက်သမားများက တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝှမ် ဦးဆောင်သော အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် လာရောက်ဗုံးခွဲလုပ်ကြံခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားနှင့် သံ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်း နှစ်နိုင်ငံအကြား လျှို့ဝှက်၍ ပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုများက နှစ်အတန်ကြာကပင် စတင်နေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံက လက်နက် ဈေးကွက်ကို ရှာဖွေရင်း မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ပြန်လည် အကြောင်းသင့်ခဲ့ရသည်။ မြောက်ကိုရီးယား အရာရှိများကို မကြာခဏဆိုသလို ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ရှိကြရသည်။ အတိုက်အခံသတင်း ရပ်ကွက်များ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့တော်သစ်နေပြည်တော်၏ အောက်တွင် မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းများတူးနိုင်ရန် အတွက် မြောက်ကိုရီးယား အကူအညီကို ရယူခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များက မြောက်ကိုရီးယားက ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့သေးသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က မြောက်ကိုရီးယား ကုန်တင်သင်္ဘောတစင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်ချရပ်နားနေသည်ကို တွေ့ကြရ သည်။ နှစ်နိုင်ငံ သံတမာန်ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးသော မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော ဆိုက်ကပ် ရပ်နားလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ရသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ကန်နမ်း-၁ (Kang Nam I) အမည်ရှိသင်္ဘောက ရန်ကုန်မြို့တောင်ဖက် မိုင် ၃၀ အကွာရှိ သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းတွင် ကျောက်ချရပ်နားနေခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကတော့ မုန်တိုင်းဒဏ်ခိုရန် ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ကြသည်။ မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောက မြန်မာရေပိုင်နက်အတွင်းတွင် ဘေးအန္တရာယ်ခိုလှုံရပုံမှာ ဤအဖြစ်အပျက်တခုတည်းသာ မဟုတ်ပါ။မြောက်ကိုရီးယား ကုန်တင်သင်္ဘောတစီးက ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင်လည်း အန္တရာယ်ကြားမှ ခိုလှုံနိုင်ရန် မြန်မာဆိပ် ကမ်းတွင် ကျောက်ချရပ်နားခဲ့ဖူးသေးသည်။ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် သင်္ဘောပေါ်တွင် စစ်ဆေးချက်များအရ "သင်္ကာမကင်းဖြစ်ဖွယ် ပစ္စည်းများ၊ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ မတွေ့ရှိရကြောင်း" ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရန်ကုန်ရှိသံရုံး အသိုင်းအ၀ိုင်းများနှင့် သတင်းထောက်များကမူ ဤသို့ဖြေရှင်းချက်ကို မယုံကြည်နိုင် ရှိခဲ့ကြသည်။၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် အတိုက်အခံသတင်းဌာနတခုက ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းကို ပြောကြားရာ၌ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အဏုမြူနည်းပညာ ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူတဦး ဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူး ဟွန် ကီးလ် ဒေါင် (Hon Kil Dong) ကို သယ်ဆောင် လာသည့် သင်္ဘောတစင်း ဇီဝနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ အဏုမြူဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။အနောက်နိုင်ငံမှ လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့် ထောက်လှမ်းရေးသတင်းရပ်ကွက်များကမူ ဤသတင်းကို ချက်ချင်း ပယ်ချခဲ့ ကြသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထံမှ တာဝေးပစ် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးရသည့် တာဝေး ပစ်ဒုံး လက်နက်များထက်စာလျှင် သမားရိုးကျ လက်နက်များနှင့် နည်းပညာများ ရရှိရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း ပို၍ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိ ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနှင့် သူ၏ခေါင်းမာဂိုဏ်သားများက ရုရှားနိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူခဲ့သည့် အဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖိုကို ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စားကြံစည်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ ဤဓါတ်ပေါင်းဖိုသည် အရပ်သုံးအတွက်လော၊ စစ်သုံးအတွက်လောဆို သည်ကို မည်သူမျှ မသိကြပါ။ ၎င်းလုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုလည်း လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ထားကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အရာရှိများက ပြောကြားကြရာတွင် ၁၀ မီဂါဝပ်ရှိ ရေသွက်သုံး ဓါတ်ပေါင်းဖိုတွင် သန့်စင်ထားသည့် ယူရေ နီယံ -၂၃၅ (uranium-235) ၂၀% ကို အသုံးပြုပြီး ဓါတ်ကြွမှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်သည့် ဓါတ်ခွဲခန်း၊ ဆေးပညာသုံး အိုင်ဆိုတုပ် ထုတ်လုပ်ရေး ဓါတ်ခွဲခန်းတခု၊ ဆီလီကွန်ဖြင့် စေးပြစ်ထိန်းချုပ်ခြင်း စနစ်များ၊ အဏုမြူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သို လှောင်သန့်စင်ရေးနှင့် မြေမြုပ်သိမ်းဆည်းမည့်ဌာနများ ပါဝင်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက အဏုမြူစမ်းသပ်ဆောင်ရွက်နေသည့် ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို ခန့်မှန်းပြောဆိုရန် ခက်လှပါသည်။ သို့ သော်လည်း မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဆက်ဆံလာနေသောကြောင့်လည်း ဤသံသယများက ပို၍ကြီးထွားလာ နေစေပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနှင့် ကင်ဂျုံအီး က အကြံတူ ပုံစံတူ အာဏာရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် မမြင်ကြရတော့ပါက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အတွက် ပို၍ ကောင်းလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သေချာသည်မှာ နှစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများသည် သူတို့ထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည့် ခေါင်းဆောင်များနှင့်သာ ထိုက်တန်ရရှိ သင့်သည် ဖြစ်ပါကြောင်း...။ဧရာဝတီအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာအာဘော် Taking the Pulse of Sick Dictators ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော် ပြပါသည်။
ကိုထွေး | စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းတို့ ယမန်နေ့က အချိန် ၂နာရီခန့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ တင်းကျပ်မှုတချို့ကို လျော့ချပေးလိုက်ကြောင်း ဦးကြည်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆိုထားသော စာဖတ်ခွင့်အတွက် တိုင်းမဂ္ဂဇင်း (Time magazine)၊ နယူးစ်ဝိခ် မဂ္ဂဇင်း (Newsweek magazine) စသည့် နိုင်ငံတကာ မဂ္ဂဇင်း ကြီးများနှင့် မြန်မာသတင်းစာများကို မှာယူဖတ်ရှုခွင့်ပြုခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ ၎င်း၏ သားထံမှ ပေးပို့စာကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုခြင်းနှင့် အကန့်အသတ်ခံနေရသော အတူနေ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့ သားအမိအား လွတ်လပ်စွာ ပြင်ပသို့ သွားလာခွင့်ပြုခြင်းတို့ကို အာဏာပိုင်များက ခွင့်ပြုလိုက်သည်ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပြသည်။ “မနေ့ကတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာ တွေ့ရပါတယ်၊ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒေါ်စုက သူ့သားရေးတဲ့ စာတွေကို လက်ခံမရတာ ကြာပါပြီ၊ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ဆိုတာ ကျနော် မသိဘူး၊ အဲဒါကို စာရေးပြီး အထူး သတင်းတပ်ဖွဲ့ကို မေတ္တာရပ်ခံထား တယ်၊ အဲဒါတွေက တားဆီးမိန့်ထဲမှာ မပါဘူး၊ တချို့ဘယ်လောက်ထိ ပြောသလဲဆို အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ထောင်သားတွေတောင်မှ အဲဒီလောက် ကန့်သတ်မှုမရှိဘူး၊ အခု ခွင့်ပြုတယ်၊ ဒေါ်စုလည်း တော်တော်ပျော်သွားတယ်”ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေ့စဉ်ပေးပို့နေသောဈေးခြင်းကို ငြင်းပယ်ထားရာမှ ပြန်လည် လက်ခံလာဖွယ်ရှိ ကြောင်း၊ လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေး မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ၎င်း၏ သားထံမှ စာကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးကြည်ဝင်းက ဆိုသည်။“အဲဒီ စာတွေကို ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းနဲ့ ထည့်ပေးမယ်တဲ့၊ နောက်တခုကတော့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့ သားအမိ တားဆီးမိန့် အကျုံးမ၀င် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနိုင်ခွင့်ကိုလည်း စာရေးမေတ္တာ ရပ်ခံထားတာ ခွင့်ပြုတယ်၊ ဒါပေမယ့် မိမိဘက်က လုပ်ထားတာကတော့ မြို့ထဲသွားရင် ဒေါ်စုအိမ်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုးမှာရှိတဲ့ သတင်းတပ်ဖွဲ့မှာ ရှာဖွေခံဖို့ လုပ်ထားတာ ရှိပါ တယ်၊ အပြင်က ပြန်လာရင်လည်း အလားတူပါပဲ၊ မူလအခွင့်အရေးလည်း မထိခိုက် လုံခြုံမှုလည်း ဖြစ်သလို စိတ်ချလက်ချ လည်း ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ စောစောကပြောတဲ့ ဆရာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် အတွက်လည်း အစီအစဉ်လုပ်ထားပြီး ဖြစ်တယ်။ အဲဒါပြီးရင် ဦးမြင့်စိုးရဲ့ ဈေးခြင်းတောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုလည်း ဆရာတင်မျိုးဝင်း ဆောင်ရွက်သွားပါလိမ့်မယ်၊ တနင်္ဂနွေနောက်ပိုင်း ဈေးခြင်းပြန် လက်ခံ မယ့် သဘောပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံသို့ သွားရောက်ရာတွင် ၎င်းအား လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့သော ဒု သတင်းတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းနိုင်ထွန်းက ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၏ သမီးကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နေကောင်းလာပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရန် အနည်းငယ် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ပြောပြသည်ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ဆိုသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသည့် သတင်းနှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြောဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။အာဏာပိုင်များဘက်မှ ကမ်းလှမ်းချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် လာမည့် ၁၅ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။“အာဏာပိုင်တွေက ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ၁၅ ရက်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့နိုင်မလဲလို့ ကျနော်ကနေတဆင့် မေးခိုင်းလိုက် ပါတယ်။ ဒေါ်စုက တွေ့ချင်ပါတယ်တဲ့၊ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်၊ အရင်တခေါက်ကလို မဟုတ်ဘူး၊ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ ကျန်းမာ ရေးစစ်ဆေးမှု အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ်”ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံရမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အယူခံလွှာမူကြမ်းကိုလည်း အတည်ပြုရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မူချောအဖြစ်ပြင်ဆင်ပြီးပါက သတင်းတပ်ဖွဲ့ထံ ခွင့်ပြုချက်ယူ၍ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံ မည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။“ကျနော်ကတော့ ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး၊ အတော်လေး ၀မ်းသာတယ်၊ မနေ့က တွေ့ဆုံမှုက နှစ်ဘက်စလုံး အတွက် ကောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သိပ်ပြီး တင်းကျပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်လွှာကြီးက ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သဘော လူလိုသူလို ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့၊ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ၊ ရှေ့အလားအလာ ကတော့ လူတွေအပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်”ဟုလည်း ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်သူလူထု၏ စိုးရိမ်မှုကို ကြားသိရ၍ ၎င်းအနေဖြင့် သဘောပေါက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယခု စတုတ္ထအကြိမ် မတွေ့ဆုံမီနှင့် တွေ့ဆုံပြီးချိန်များ တွင် စစ်အစိုးရ ဘက်မှ ဒု ရှေ့နေချုပ် ဦးမြင့်နိုင်၊ နေပြည်တော်မှ သတင်းတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးတင်သိန်းတို့ နှင့် တွေ့ဆုံရ ကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ပ အစားအစာ လက်မခံခြင်းသည် စစ်အစိုးရ၏ ဥပဒေနှင့် မညီသည့် လုပ်ဆောင် ချက်များကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် စင်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်၍ မတရားဖမ်းဆီးထားခြင်း၊ စတင်ထိန်းသိမ်း စဉ်က ဆရာဝန်နှင့် တလတကြိမ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခွင့်မည်ဆိုသည့် ကတိ ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား စောင့်ရှောက်နေသော ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသားအမိအား ကန့်သတ်မှုများပြုနေခြင်း စသည်တို့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် နေ့စဉ်ပုံမှန် ပေးပို့နေသော ဈေးခြင်းကို လက်မခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေး အသုံးပြုရန်အာဏာပိုင်များကို တောင်းဆိုထားကြောင်းလည်း အန်အယ်လ်ဒီ အသိုင်းအ၀န်းမှ ကြားသိရသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အပြီးမှ စတင်၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် အထိန်းသိမ်းခံနေရသည်မှာ ၅ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် နေရချိန် စုစုပေါင်း ၁၂ နှစ် ကျော်ပြီ ဖြစ်သည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စာနှင့်သတင်းစာများ ဖတ်ခွင့်ပြုရပြီ မြင့်မောင် သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 12 2008 23:26 - မြန်မာစံတော်ချိန် အထိန်းသိမ်းခံ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မိသားစုဝင်များထံမှ စာဖတ်ခွင့်နှင့် သတင်းစာစောင်များ ဖတ်ခွင့်ကို စစ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တောင်းဆိုချက် အချို့ကို စစ်အစိုးရက လိုက်လျောခဲ့ရာတွင် စာအဆက်အသွယ် ပြုခြင်းနှင့် ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းဖတ်ခွင့်တို့ ရရှိခဲ့သည်ဟု သူမ ဦးဆောင်သော နိုင်ငံရေးပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ထို့အပြင် သူမနှင့်အတူ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသလို ဖြစ်နေသူ စောင့်ရှောက်မှု ပြုနေသော ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် သမီး မဝင်းပပ တို့ကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ကြာသပတေးနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းတို့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံခဲ့ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုသတင်း ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။“ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့် ပြုတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက် ရပါတယ်။ မိသားစုစာ နှင့် ဂျာနယ် ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ ဖတ်ခွင့်ရရှိဖို့ သဘောတူညီချက် ရပါတယ်။ ကျန်နေတာကတော့ အယူခံကိစ္စ မပြီးပျက်သေးဘူး ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်နေတယ်” ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယမန်နေ့က ၂ နာရီကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရက သူမကို တရားမဝင် ထိန်းသိမ်းထားမှုအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။“သူကျန်မားရေး ကောင်းပါတယ်” ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသွားသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အသေးစိတ်ကို သူမ၏ ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကသာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။ပုံမှန်တပတ်တခါ အစားအသောက်များ ပို့ဆောင်နေခြင်းကို လက်ခံရယူရန် သြဂုတ်လလယ် ကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြပြီး စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်နေသည် ဆိုသော ကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့ခဲ့ကာ သူမ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တောင်းဆိုချက်များကို စစ်အစိုးရလိုက်လျောပီတာအောင် / ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တားဆီးမိန့် အယူခံဝင်နိုင်ရေးကိစ္စမှလွဲ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသူတဦး ရသင့်သည့် အခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုထားမှုကို စစ်အစိုးရက လိုက်လျောလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ပြောသည်။ယမန်နေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိသားစုရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထပ်မံသွားရောက်တွေဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဦးကြည်ဝင်း၏ ပြန်လည်ပြောပြချက်အရ အန်အယ်လ်ဒီပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ဦးဥာဏ်ဝင်းက “အားလုံးနီးပါးရပြီလို့ပဲ ပြောရမှာပဲ။ ရပါတယ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လိုအပ် သလိုတော့ ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့။ ကျန်သေးတာကတော့ အယူခံကိစ္စပဲ။ အယူခံတရားဝင်တင်နိုင်ဖို့၊ တရားဝင်အယူခံဖို့ ဒါတွေက လုပ်နေဆဲတန်းလန်းပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အပြင်ကအစား အစာ ပြန်ပြီးလက်ခံတော့မယ့် အနေအထားလို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုလက်ခံမလဲ ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတွေ့ပြီးရင် ရိက္ခာသွင်းဖို့ကိစ္စတွေ အဆင်ပြေပြေ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ” ဟု ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေး အပြင်ပန်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့်တွေ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံထားသည် ဟုလည်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ နေထိုင်သည့် ဒေါ်ခင်ခင် ၀င်းတို့သားအမိကိုလည်း အာဏာပိုင်များက မနက် (၆) နာရီမှ ည (၆) နာရီအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို သဘောတူလိုက်ကြောင်း သိရသည်။အယူခံဝင်ရေးကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းတို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီး ဦးကြည်ဝင်း၏ လက်ထောက်အဖြစ် ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် ဦးလှမျိုးမြင့်တို့ (၂) ဦးကို ခန့်ထားခွင့်တောင်းခံ ထားရာတွင် အာဏာပိုင်တို့က ဦးလှမျိုးမြင့်ကိုသာ ခွင့်ပြုပြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ၀င်ဖြစ်နေသဖြင့် ပါတီနှင့် မဆက်သွယ်ရဆိုသည့် မူလကန့်သတ်ထားချက်အရ ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိ ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မူလကန့်သတ်ခံနေရသည့် တားဆီးမိန့် ဥပဒေနှင့်မဆိုင်ဘဲ ပိတ်ပင်ခံ ထားရသည့် မိသားစုထံမှ ပေးစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ သွင်းယူခွင့် အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက ရပိုင်ခွင့်များရရှိရန် ပြီးခဲ့သည့်လကတည်းက အာဏာပိုင်များထံ တင်ပြတောင်း ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ထိုသို့တောင်းဆိုနေစဉ်အတွင်း ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းကိုသာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြင်ပ အစားအစာ ပေးပို့သည့် အ၀ယ်တော် ကိုမြင့်စိုး၊ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်၊ နအဖ ဆက်ဆံရေး ၀န်ကြီးတို့ သာမက သူမ၏ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုပါ လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်းမပြုခဲ့ပေ။By NEJ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆိုချက်တချို့ စစ်အစိုးရ လိုက်လျော 12 September 2008 မနန္ဒာချမ်း နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကနေ အာဏာပိုင်တွေထံ တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကို အာဏာပိုင်တွေက အကန့်အသတ်နဲ့ လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က အခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မိသားစု ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီတောင်းဆိုထားတဲ့ အထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစုဝင်ထံက ပေးပို့တဲ့စာတွေကို လက်ခံရရှိဖို့၊ ပြီးတော့ တိုင်းမဂ္ဂဇင်း၊ နယူးစ်ဝိခ် မဂ္ဂဇင်း နဲ့ မြန်မာသတင်းစာတွေကို ဖတ်ရှုခွင့် ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့ မိသားစုကိုလည်း နေထွက်ပြီးချိန် နဲ့ နေမ၀င်ခင် အပြင်သွားလာခွင့် ဒါတွေကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က သဘောတူလိုက်တာလို့ မနေ့က တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစာတွေနဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံကို ယူဆောင်ပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ အဲန်အယ်လ်ဒီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေ ကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။“ကျနော် ဆရာဦးကြည်ဝင်းဆီက သိရတာပဲ။ အဲဒါတွေကို လက်ခံပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူပို့မလဲ ဆိုတာ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းရဲ့ ပုံမှန်သွားတဲ့ဆီမှာ ယူသွားမယ်လို့ အဲလိုသိရပါတယ်။”အဲန်အယ်လ်ဒီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တောင်းဆို ချက်တွေကို သဘောတူခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကလည်း အခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် Medical Check Up လုပ်ဖို့အတွက် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီ့မတိုင်ခင်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း လည်း ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ကတည်းကဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ၅ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ် လို့လည်း သူက ပြောဆိုပါတယ်။ Summary only...
ပုဒ်မ ၁၃၀(ခ)မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တရုတ်နှင့် ရုရှ နိုင်ငံတို့က ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ပယ်ချခဲ့သည့်အပေါ် ဝေဖန်သော ကြောင့် စွဲဆိုသည့် ပုဒ်မ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ဧရာဝတီ | စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ထင်ရှားသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့မှ ၃၀ ကျော်ကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက် အင်္ဂါနေ့က ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးအနေနှင့် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် အတွင်း၌ ရုံးထုတ်ကြောင်း ရှေ့နေ ဦးညီညီလှိုင် ကပြောပြသည်။ဦးညီညီလှိုင်က “ကျနော်တို့ကို ထောင် အနှစ် တထောင် ပဲချချ ဖုန်းကွယ်ထားလို့မရပါဘူး၊ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဥပဒေဘောင် အတွင်းကနေ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်က တရားသူကြီး ကို ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ဦးညီညီလှိုင်သည် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့အား စွဲဆိုသည့်အမှုများကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသော ရှေ့နေ တဦးဖြစ်သည်။အင်္ဂါနေ့က မင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့မှ ၃၄ ဦးကို ပုဒ်မ ၃၃(က)၊ ၁၇(၁) တို့ဖြင့် စွဲဆို၍ ရုံးထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး နအဖ ကြေညာချက် ၅/၉၆ အရ အမျိုးသားညီလာခံကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှု၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၃၀ (ခ) အရ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များအား အကြည်ညိုပျက်စေမှုများဖြင့်လည်း ၎င်းတို့အား စွဲဆိုထားကြောင်း ဦးညီညီလှိုင်က ပြောသည်။ယင်းပုဒ်မ ၁၃၀(ခ)မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တရုတ်နှင့် ရုရှ နိုင်ငံတို့က ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ပယ်ချခဲ့သည့်အပေါ် ဝေဖန်သော ကြောင့် စွဲဆိုသည့် ပုဒ်မ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အင်္ဂါနေ့က ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရုံးထုတ်သည်ကို မိသားစုဝင်များ အပါအ၀င် တခြားသော မည်သူ တဦး တယေက်ကိုမျှ အသိပေးခြင်းမရှိဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ယခု ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့မှ အများစုသည် စစ်အစိုးရ၏ ထောင် ၁၅ နှစ်ကျော် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးသူများဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက လောင်စာဆီဈေးကို အစိုးရက အဆမတန်မြှင့်တင်သည့် အတွက် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြသောကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ ဖြစ်သည်။ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေး၊ ကိုကျော်မင်းယု(ခ) ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမင်းဇေယျ အပါအ၀င် အဆိုပါ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအား ယမန်နှစ်ကဖမ်းဆီးထားပြီး ပုဒ်မအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲစွဲဆို၍ ထောင်သွင်းထားခဲ့သည်မှာ တနှစ် ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်း ကိုမင်းကိုနိုင်အား ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင်ပါရှိသည့် အင်တာဗျူးများ၊ ပြောဆိုမှုများကို အထောက်အထားအဖြစ် တင်ပြစွဲဆိုမှုများလည်းရှိသည်ဟု ဦးညီညီလှိုင် က ပြောသည်။ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်က ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ရာတွင် လက်မထိပ်မခတ်ဘဲ ရုံးထုတ်ရန်နှင့် မိသားစု ၀င်များ အပါအ၀င် အများပြည်သူ ကြားနာနိုင်သော တရားစီရင်သည့် တရားရုံးတွင် အမှုစစ်ဆေးရန်တို့ကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များက တောင်းဆိုထားသည်။ “မိသားစုတွေ နားထောင်ခွင့်တော့ ရပါပြီ၊ အခုထိတော့ လက်ထိပ်နဲ့ ရုံးထုတ်နေတုန်းပါပဲ”ဟု ရှေ့နေကြီးဦးအောင် သိန်းက ပြောသည်။ယခု တရားစွဲဆို ထားသူများအား အပြစ်ရှိသူများဟု သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် အာဏာပိုင်များအနေနှင့် လွတ်လပ်မျှတ သည့် တရားရုံးအဖြစ်လက်ခံဆောင်ရွက်ရန် သံသယရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။“တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ ကျနော်တို့က ကိုယ့် ယူဆချက် ထင်မြင်ချက်ပေးလို့တော့ မရဘူး၊ အမှုတခုကို တရားရုံးက စစ်ဆေးလို့မပြီးခင် ဘာမှပြောခွင့်မရှိဘူး၊ အခု ရဲချုပ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ အပြစ်ရှိတယ် လို့ ပြောနေတာတွေရှိ တယ်၊ အဲဒါတောင် လုပ်ခွင့်မရှိဘူး၊ သူတို့က အာဏာပိုင်ဆိုတော့ လုပ်ခွင့်ရရင် ရမှာပေါ့ဗျာ၊ ကျနော်တို့ ရှေ့နေတွေ က အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ ကြိုတင်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ယူဆချက် ထင်မြင်ချက်ကို ပေးလို့ မရဘူး၊ သူတို့ဟာ သူတို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာတာပေါ့၊ ကျနော်တုိ့ကတော့ တရားရုံးပေါ်မှာ တင်ထားတော့ တရားရုံး ပုံစံနဲ့ အဓိက သွားရမှာပဲ”ဟု ဦးအောင်သိန်းက ဆက်ပြောသည်။၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့မှ ကိုထွန်းမြင့်အောင်၊ ကိုစိုးထွန်းနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဖမ်းဆီးခံရသော မနီလာသိန်း အပါအ၀င် ၉ ဦးအား တရားခံပြေးအဖြစ် အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ထားပြီး တရားလိုများကို အင်္ဂါနေ့က စစ်ဆေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
အေးချမ်းမြေ့ | စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈သူ့မှာ ရော်ဘာခြံတွေရှိသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေလည်း များစွာရှိသည်။ သို့သော် လည်း သူမပျော် ရွှင်နိုင်။ သူ ပိုင်ဆိုင်သမျှထဲမှ သူတန်ဖိုးအထားဆုံးသော သား ၂ ယောက် က မူးယစ်ကျေးကျွန်များ ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏။သားကြီးက ခုမှ ၁၈ နှစ်။ မူးယစ်ဆေးကို လုံးဝစွဲနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ဆေးဖြတ်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေရသည်။ သားအငယ် ကတော့ မူးယစ်ဆေး စွဲတာမဟုတ်။ သို့သော်လည်း မူးယစ် စေတတ်သည့် အရက်ကို အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာပင် စွဲစွဲ လန်းလန်း သောက် နေပြီ ဟု မွန်ပြည်နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာတရွာမှ ဒေသခံ အမျိုးသမီး ကြီး တဦးက ပြောပြသည်။“သားကြီးကမူးယစ်ဆေးစွဲသွားတော့ သားငယ်လက်ထက်မှာ အဲလိုမဖြစ်ရအောင် အပေါင်း အသင်းတွေနဲ့ ခွဲထားလိုက်တာ ကလေးက စိတ်ကျပြီး အရက်တွေဖိသောက်ရင်း အရက် သမား လုံးလုံး ဖြစ်သွား တော့တာပဲ” ဟု သူကဆက်ပြောသည်။ထိုကျေးရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများတွင် မူးယစ်ဆေးများကို လူငယ်များက သုံးစွဲ ရုံမကဘဲ ရောင်းဝယ်ဖောက် ကားခြင်းများပါ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ထွန်းလျှက်ရှိကြောင်း ဒေသခံ များထံမှ ကြားသိရသည်။“ကျနော်တို့မှာ လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။ ရော်ဘာခြံတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်သမား ငှားလို့ မရဘူး။ ဘယ်သူမှ ပင်ပင် ပန်းပန်း မလုပ်ချင်ကြဘူး။ မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်တာက ပိုက်ဆံများများနဲ့ လွယ်လွယ်ရနေတာကိုး” ဟု ဒေသခံ စီးပွား ရေးသမားတဦးက ပြော သည်။ထိုဒေသတဝိုက်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းများ အကြီးအကျယ် ပြုလုပ်နေကြ သော်လည်း အရေးယူမှုမရှိကြောင်း မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူ အထက်တန်းကျောင်းသားတဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူကဆိုသည်။အထက်တန်းကျောင်းသား ၃ ဦး မူးယစ်ဆေးစွဲနေသဖြင့် မိဘဖြစ်သူတို့က ဘုရားသုံးဆူ ရဲစခန်းကို တိုင်ရာ ရဲစခန်းက စစ်တပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ပြောလိုက်သဖြင့် စစ်တပ်ကို အကြောင်းကြားရာ စစ်တပ်ကလည်း မယက ကိုလွှဲချသဖြင့် နောက်ဆုံး မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ရုံးသို့ရောက်လာကြောင်း ၎င်းရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြသည်။“ကျနော်တို့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ကျနော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့နယ်မြေလည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ ကလေးတွေကိုပဲ ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ ခဏ ဖမ်းထားလိုက်ရတယ်” ဟု ထိုတာဝန် ရှိသူက ပြောသည်။မူးယစ်ဆေးစွဲသူတို့၏ မိဘများမှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူ၊ ထုတ်လုပ်သူတို့ကို အတိအကျ သိထား၍ ရဲစခန်းကိုတိုင်တန်း သော်လည်း အရေးယူမှုလုံးဝမရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ထိုဒေသသို့ရောက်လာသော ရဲအရာရှိများမှာ ဒေသခံ မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်သူတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ လာဘ်ယူခြင်း၊ လစဉ် ဆက်ကြေးတောင်းသကဲ့သို့ ငွေတောင်းခံခြင်း များသာ ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။“ဒီဘက်ကို တာဝန်ကျတဲ့ ရဲအရာရှိတွေက ဒေသကို ပြုပြင်သွားတာ မရှိဘူး။ ဖျက်သွား တာချည်းပဲ။ ပြန်သွားတဲ့သူတွေ ကလည်း နာမည်ကောင်းနဲ့ ပြန်ရတဲ့သူမရှိဘူး။ လာဘ်စား လို့။ မဟုတ်တာလုပ်လို့ ရာထူးကျပြီးပြန်ရတဲ့သူတွေချည်းပဲ” ဟု သူက ဆိုသည်။ယခုနောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လူငယ်လူရွယ်များကြား၌ စိတ်ကြွဆေး အပါအဝင် မူးယစ်ဆေးများ သုံးစွဲမှု ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ကြီးထွားလျှက်ရှိသည်။ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ရုံး (UNODC) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာ နိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့အလယ် ပိုင်းနှင့် အာရှနိုင်ငံများတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ကြီးထွား ပြန့်နှံ့နေသည်ဟု သိရသည်။ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းတွင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ကြီးထွားပြန့်နှံ့လျှက်ရှိပြီး အထူး သဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား များထဲတွင် မူးယစ်ဆေးစွဲသူ ပိုမိုများပြားနေကြောင်း ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့ (KDNG) ၏ သဘာပတိတဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်ဝကပြော သည်။“ကချင်လူငယ်တွေရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေအတွက် ရင်လေးစရာပဲ” ဟု သူက ဆိုသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြည်တွင်းမူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးများ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်သဖြင့် သုံးစွဲသူလျော့ကျလာ သည်ဟု နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြ ရေးသား နေသော်ငြားလည်း နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တချို့ တို့၏ လက်ဝယ်၌ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ့ရှိသောကြောင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူမှု သတင်းများ ကြားနေရ ဆဲဖြစ်သည်။ယခင်အပတ်က ဒါရိုက်တာ မိုက်တီး၏ လက်ဝယ်တွင် စိတ်ကြွဆေး အက်တာစီဆေးပြား ၁၅ ပြားတွေ့ရှိသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ဗဟိုက တရားစွဲဆိုထားသည်ဟူသော သတင်းကြားခဲ့ရပြီး အလားတူ ကျော်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကြီး၏ အစုရှယ်ရာရှင် တဦး ဖြစ်သူ ဦးဌေးအောင်ကိုလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေး ယူထား ကြောင်း ခိုင်လုံသည့် သတင်းရင်းမြစ်တခုမှ ကြားသိရသည်။ထို့ပြင် ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်း လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူ မောင်ဝိတ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၆ ဦးတို့ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ် တချို့တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။စိတ်ကြွဆေးပြားများမှာ ဈေးနှုန်းအလွန်မြင့်မားသောကြောင့် လူချမ်းသာ သားသမီးများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသာ သုံးစွဲနိုင်ကြသည်။“ကျနော်တို့ကျောင်းက အနုပညာရှင်တွေ၊ တော်တဲ့သူတွေထွက်သလို မူးယစ်ဆေး စွဲတဲ့ သူတွေလည်း တော်တော်ထွက် တယ်” ဟု ဒဂုံ အထက ၁ မှ ကျောင်းသားဟောင်း တဦးကပြောပြသည်။ ၎င်းကိုယ်တိုင်ပင် မူးယစ်ဆေးကို ထိုကျောင်းမှ ထွက်ပြီးသည်ထိ နှစ်အတော်ကြာကြာ ဆက်လက်သုံးစွဲနေခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ထိုကျောင်းမှ ကျောင်းသားအများစုမှာ တတ်နိုင်သည့် လူချမ်းသာ သားသမီးများဖြစ်ကြပြီး ကျောင်းဝန်းအတွင်းတွင်ပင် သုံးစွဲကြသည်ဟု သူကဆက်ပြောသည်။မကြာသေးမီက အထက ၁၊ ဒဂုံ အပါအဝင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်း များကို ဆေးဝင်စစ်ခဲ့ရာ နာမည်ကြီး ကျောင်းများရှိ အထက်တန်းကျောင်းသား အတော်များများ တွင် မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲထားသည့် လက္ခဏာတွေ့ရှိရသည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပြသည်။မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနှင့် ပြည်တွင်းရှိ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု အခြေအနေများကို ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးဘဲ လျှို့ဝှက်စစ်ဆေး အရေးယူမှုများသာ ပြုလုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ ဇွန်လကကျင်းပခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးစားပြုမှုနှင့် တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ အခြေခံစာရင်း ကောက်ယူမှုအရ သုံးစွဲသူလျော့ကျသွားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ ဦးရေ ၆၁၄၅၅ ရှိရာမှ ၂၀၀၈ ဇန်နဝါရီလ အထိ စာရင်းကောက်ယူမှုအရ ၅၄၇၀၅ ဦးသာ ရှိတော့သည်ဟု ဆို၏။ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူ ဒေသပတ်ဝန်းကျင်က မိဘများမှာတော့ မိမိတို့သားသမီးများ အတွက် အနာဂတ်ကို ကံပေါ်၌သာ ပုံချနေရသည်။ ဒေသခံအာဏာပိုင်များကို အားကိုး၍ မရနိုင်မှန်း သူတို့ သေချာပေါက် သိနေကြသည်။“ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ လူငယ် ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက်က မူးယစ်ဆေးစွဲတဲ့သူချည်း ပဲ။ ပစ္စည်း ရဖို့ကလည်း အလွယ် တကူဖြစ်နေတာကိုး” ဟု ဘုရားသုံးဆူ၊ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ကြံတောကျေးရွာမှ ကျောင်းဆရာတဦးက သူ့အတွေ့ အကြုံအရ ပြောပြသည်။
ဒေါ်စု တောင်းဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက် တချို့ လျှော့ချပေး...